स्वास्थ्य – Page4– JanaSanchar.com
डा. बालकृष्ण साह ‘बिहेवारी बीस वर्ष पारि ।’ शारीरिक तथा मानसिकरूपमा २० वर्षपछि मात्र युवायुवती बिहेका लागि योग्य हुन्छन् । तर, अहिलेको परिदृश्य फरक छ । उमेर नपुग्दै बिहे गर्ने र आमा बन्ने क्रम बढ्दो छ । जसका कारण उनीहरूमा यौनजन्य समस्या वा जटिलता देखा पर्ने गरेको छ । आफू चिकित्सकको रूपमा खटिइरहँदा मैले यस्ता अनेकौं घटनाको साक्षी..
चिसो पेयपदार्थले हुनसक्छ क्यान्सर !
एजेन्सी। के तपाईं तिर्खा मेटाउने नाममा बजारमा पाईने चिसो पेयपदार्थ पिउने गर्नुहुन्छ ? यदि तेसो हो भने अव देखि सावधान हुनुहोस् । किनकि त्यस्ता बजारीया पेयपदार्थले मानव स्वास्थ्यमा साधारण हानिनोक्सानी पुर्याउने होइन कि प्राणघातक रोग नै निमत्याउन सक्ने क्यान्सर सम्बन्धि गरिएको एक नयाँ अनुसन्धान ले देखाएको छ । अनुसन्धान अनुसार,..
के तपाईं पनि फास्टफुड र बजारमा भेटिने ‘रेडी टु इट फुड’ को शौखिन हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईं जानेर-नजानेर मोनो सोडियम ग्लुटामेटको भरपुर सेवन गरिरहनुभएको छ । मोनो सोडियम ग्लूटामेट अर्थात एमएसजी स्वास्थ्यका लागि कति खतरनाक छ भन्ने तपाईंलाई जानकारी छैन होला । यदि तपाईं प्याकेटमा ‘नो एडेडे एमएसजी’ को लेवल देखेर यसलाई सुरक्षित..
यौवनावस्थामा प्रवेशसँगै गोप्य अंगमा रौं पलाउन थाल्छ । कतिलाई यो मन पर्छ त कतिलाई मन पर्दैन । आधुनिक महिलाहरु धेरैले गोप्य अंगमा सेभ गरेर सफाचट बनाउने गरेका छन् । यस्तो रौ कहिल्यै पनि आम चर्चाको विषय बन्दैन । सायद यही भएर होला यसका विषयमा धेरै भ्रमहरु हामीमाझ विद्यमान छन् । गुप्तांगको रौंका विषयमा मानिसहरुमा रहेका ७ भ्रम र तीनको यथार्थ..
पोखरा लेखनाथ-३३ मा बृहत नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न,
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका - ३३ लामगादी स्थित लायन्स क्लब अफ पोखरा टेम्पल सिटी र सुरक्षा पालुवा बहुउद्वेश्यिय सहकारी संस्था लि. को संयुत आयोजनामा भएको एक दिने बृहत नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ । शनिवार माघ १३ गते शुक्ला गण्डकी आधारभूत बिध्यालयको प्रांगणमा भएको उक्त स्वास्थ्य शिविरमा पेट, छाती, तथा नाँक, कान, घाँटी परिक्षण, छाला..